रोचक खबर Archives - Everest Media News
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १९, २०७५, चर्चित अन्तराष्ट्रिय टिभी रियालिटी शो ‘हु वान्टस् टु बि मिलेनेयर...
असोज १०- अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डि.भी.) कार्यक्रम २०२० का लागि असोज १७ देखि आवेदन खुल्ने भएको छ ।आवेदन दर्ता...
टाइटनिक फिल्मका नायक लियोनार्दाे डिकाप्रियोलाई नचिन्ने सायदै कोही होलान् । उनै लियोनार्दाे भने नेपालमा बाघको स...
टोकियोमा राजेश पायल राईको सायोनारा पार्टी हुँदै…
जापान, शिनओकुबो । नेपाली गीत संगीत प्रेमी जापानबासी नेपालीहरुले राजेश पायल राईको सम्मानार्थ तथा राजेश पायल राई...
नीताले भनिन् भिनाजु , जवाफमा गोबिन्दाले भने यस्तो पढ्नुहोस पुरा…..
नेपाली चेली सुनितालाई बिवाह गरेकै कारण बलिउड नायक गोबिन्दालाई नेपालको ज्वाई र अधिकांश फिल्मीकर्मी र दर्शकहरुले...
४० वर्षकी आमासँग छोरा र्‍याम्पमा पढ्नुहोस पुरा….
इटहरी : इटहरीकी ४० वर्षीया उर्मिला भट्टराई साडी लगाएर र्‍याम्पमा उत्रिइन् । उनीसँगै थिए छोरा विनायक । कोटमा सज...
In: मनोरञ्जन, रोचक खबर
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १९, २०७५, चर्चित अन्तराष्ट्रिय टिभी रियालिटी शो ‘हु वान्टस् टु बि मिलेनेयर?’को फ्रान्चाइज नेपाल भित्रिएको छ। कार्यक्रम नेपालमा ‘को बन्छ करोडपत... Read more
असोज १०- अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डि.भी.) कार्यक्रम २०२० का लागि असोज १७ देखि आवेदन खुल्ने भएको छ ।आवेदन दर्ता अवधि नेपाली समयअनुसार राति ९ः४५ बजेबाट सुरु हुने गरी खुल्नेछ र २० कात्तिकमा रात... Read more
टाइटनिक फिल्मका नायक लियोनार्दाे डिकाप्रियोलाई नचिन्ने सायदै कोही होलान् । उनै लियोनार्दाे भने नेपालमा बाघको संख्या बढेपछि खुसी भएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका बाघ संरक्षणका सद्धभावना दुत स... Read more
जापान, शिनओकुबो । नेपाली गीत संगीत प्रेमी जापानबासी नेपालीहरुले राजेश पायल राईको सम्मानार्थ तथा राजेश पायल राई फाउण्डेशनको सहयोगार्थ जापानको टोकियोमा भोली सेप्टेम्वर २१ का दिन सायोनारा पार्ट... Read more
नेपाली चेली सुनितालाई बिवाह गरेकै कारण बलिउड नायक गोबिन्दालाई नेपालको ज्वाई र अधिकांश फिल्मीकर्मी र दर्शकहरुले भिनाजुको साईनो लगाउँने गरेका छन् । केही नेपाली बोल्न र सबै कुरा बुझन सक्ने गोबि... Read more
इटहरी : इटहरीकी ४० वर्षीया उर्मिला भट्टराई साडी लगाएर र्‍याम्पमा उत्रिइन् । उनीसँगै थिए छोरा विनायक । कोटमा सजिएका विनायक र उर्मिला र्‍याम्पमा सँगै हिँडे । इटहरीस्थित बिहानी डान्स सेन्टरले आ... Read more
टेलिभिजनकी अभिनेत्री मौनी रोयको बलिउड डेब्यू फिल्म ‘गोल्ड’ बक्स अफिसमा सफल भएको छ । साथै फिल्ममा मौनी रोयको अभिनयको पनि प्रशंसा भएको छ । यस फिल्मबाहेक मौनी रोय अहिले अभिनेता रणवीर कपूर र आलि... Read more
ऐश्वर्याले हात पारिन अवार्ड….
मुम्बई : ऐश्वर्या राय बच्चनले ‘मेरिल स्ट्रिप अवार्ड फर एक्सिलेन्स’ अवार्ड हात पारेकी छन्। पूर्व मिस वल्र्ड ऐश्वर्यालाई उनले भारतीय फिल्म उद्योगमा दिएको योगदानको कदर गर्दै यो अवार्ड प्रदान गर... Read more
लाहुरेका वीरगाथा पछ्याउँदै…….
काठमाडौं : ब्रिटिस गोर्खाबाट सन् १९९३ मा रिटायर्ड भएपछि टीम आई. गुरुङले आफ्नो पूर्ण समय लेखनमा लगाए। समयसँगै बित्दै जाने जीवनलाई सार्थक बनाउन उनले दर्जन बढी पुस्तक लेखे। पोखरा घर भएका गुरुङ... Read more